Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Tetika maloto
Inty sy Nday: Tetika maloto
Isan’ireo nambara fa vokatra ny fiaraha-miasan’i Inde sy i Madagasikara, ary notokanana ny alarobia teo, nandritra ny fandalovan’ny filohampirenena Indianina, Ram Nath Kovind, teto ny foibe fitiliana ny toe-tany ho fanoitran’ny fampiroboroboana ny eny Ambanivohitra (Centre Géo-Informatique appliqué au Développement Rural = CGARD). Nambara moa fa 3 Tapitrisa dôlara no nentin’ny fitondram-panjakana Indianina nanangana azy io eto amintsika, ary i Madagasikara no voalohany nametrahana azy io amin’ireo firenena dimy aty Afrika hisitraka azy io.
Dia mirehaka aoka izany ny mpitondra Malagasy, ka heveriny ho tsy takatra ny maro ny tetika maloto ao anatin’ny fametrahana an’io Foibe fitiliana io.
Raha ny lafiny ara-teknika no asian-teny aloha dia ho afaka mandray ireo vaovao avy amin’ny zana-bolana (satellite) momba ny toe-tany eto io foibe “Cgard” io.
Amin’izao fotoana dia iarahantsika Malagasy mahafantatra fa miroborobo aoka izany ny fihazakazaky ny avy any ivelany mitetika ny hamaritra toerana manokana hananganana seha-pihariana eto. Io no nahadodona ny fitondrana Hvm nanao ilay lalàna momba ny Faritra ara-toekarena manokana (Zone économique spéciale=ZES).
Ny tena tarigetran-dry zalahy dia ny hangorona ny tany midadasika azo volena eto. Manoatra noho ny fifanarahana nokasain-dRavalomanana natao tamin’ny orin’asa koreanina tatsimo “Daewoo” tamin’ilay velaran-tany 1.300.000 Ha tamin’ny 2007-2008. Manana traikefa manokana ny amin’io resaka filalaovana ny tombontsoa avy amin’ny tany io ny minisitra ny Fambolena Narisson Randriarimanana satria efa noporofoiny tao anatin’ny fitondrana Ravalomanaa, fony izy minisitra ny Fambolena tamin’izany io traikefany io. Tsiahivina fa izy no isan’ny nilalao ny omby teto tamin’ny alalan’ilay nantsoina hoe “Valabe” tany amin’iny faritr’Ihorombe io tamin’izany fotoana nitondran-dRavalomanaa izany.
Etsy ankilany, io faritra manokana ara-toekarena (ZES) io koa dia eo ihany ny hoe hanangana seha-pihariana eo, na fambolena na fiompiana na fananganana orin’asa, fa ny harena ao ankibon’io faritra manokana io koa no tena andrandrain-dry zalahy, ka ity foibe “Cgard” ity dia fanoitra ho amin’izany.
Noho izany, raha resahina ny hoe “fampandrosoana ny eny ambanivohitra” no isan’ny ho voaantok’io foibe “Cgard” io dia mety ho marina izany saingy fampandrosoana ho amin’ny tombontsoan’iza aloha ?”
Izahay dia mailo satria maro ny tranga efa niseho teto ka nampiasan’ny mpitondra nifandimby ny tetika malotony izay nikatsahany ny tombontsoany manokana sy ny vahiny niray tsikombakomba taminy, ary araka ny voalaza etsy aloha dia manam-pahaizana avo lenta ny amin’izany ny minisitra ny Fambolena Randriarimanana Narisson. Dia hianona amin’ny fampandriana adrisa ataon’ny fitondrana ankehitriny amin’izany ve isika ? Aza hadinoina fa tsy ny tombontsoan’i Madagasikara sy ny Malagasy mihitsy no nanosika ny mpitondra fanjakana Indianina ho nanangana sy nandany vola 3 tapitrisa dôlara ho amin’io, ary nahatongavan’ny fiolohampirenena Indianina nitokana azy io teto tamin’ny alarobia fa ny tombontsoan’ny teratany Indianina, dia ny karana izany. Ka ho voasokitra ao anatin’ny diarin’ny tantaran’i Madagasikara koa ny anaran’ny mpitondra fanjakana Rajaonarimampianina sy ny filohampirenena Indianina amin’io tontolon’ny fiaraha-mitsikombakomba maloto ikatsahan’izy ireo tombontsoa manokana io, ka handrobany ny velaran-tany midadasika sady mahavokatra eto no hilibany amin’ireo harem-pirenentsika ao ankibon’ny tany ao.
Izay manan-tsaina, aoka izy handinika.